​​Prezdaantiin Masri mariin hidha laga Abbaay irratti geggeeffamaa ture fashalaahuun nageenya naannicha irratti rakkoo uumaa jira jechuun akeekkachiise
Prezdaant Abdulfattaah Al-Sisi kora walii gala UN irratti haasaya godheen, hidha laga Abbaay Ityoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin biyyi isaa Ityoophiyaa fi Suudaan waliin geggeessaa turte kan fashalaaye tahuu ibsuun, kun immoo nageenya naannichaa gara hamaatti geessaa jira jechuun ibse.
Prezdaant Al-Sisiin haasaya isaa kanaan “Ityoophiyaan qorannoo gahaa osoo hin geggeessin hidha laga Naayil kan jalqabde tahus, Masri kana irratti mufii heddu hin qabdu ture. Haata’u malee eega ijaarsi hidha laga Abbaay xumuramee booda, hujiin bulchiinsaa akka ogeessota biyyoota sadeenitiin geggeeffamu, akkasumas bishaan hidha laga Abbaay yeroo waggaa saddeet keessatti akka guutamu, yaada nuti dhiheessine Ityoophiyaan ni didde, Kun immoo mootummaa Masri mufachiisee jira” jechuun kora UN irratti hoggantoota biyyoota addunyaatti hime.
Ministeeri Bishaan, Inarjii fi Jallisii Ityoophiyaa Injinar Silashi Baqqalaa torbee dabre ibsa kenneen, Masri dhimma hidha Laga Abbaay dhimma teeknikaa tahuu osoo beektu ija siyaasaa qofaan kan ilaalaa jirtu tahuu ibsuun, keessumattuu miidiyaaleen biyyatti dhimmicha gara hamaatti oofaa jiran jechuun isaa ni yaadatama.
Mootummaan Masri hidha laga Abbaay ilaalchisee kanaan dura yeroo heddu komii cimaa kan dhiheessaa ture yoo tahu, dhimmicha irratti duula Dipilomaasii bal’aa kan jalqabe tahuus odeeyfannoon argame ni addeessa. Haaluma kanaan Walgahii Gamtaa biyyoota Arabaa dhiheenya kana Kaayiroo keessatti geggeeffame irratti, ministeerri haajaa alaa biyyattii Saamii Shukrii “mariin hidha laga Abbaay akka hin milkoofne Ityoophiyaan danqaa taatee jirti” jechuu isaa gaazexaan biyyattii Al-Monitor jedhamu gabaase. Dabalataanis ministeerri haajaa alaa biyyatti dipilomaatota biyyota Awrooppaa Kaayiroo keessa jiran walitti qabuun, “Ityoophiyaan dhimma laga Abbaay ilaalchisee fedhii isii qofa hordofaa jirti” jechuun yakke.
Haaluma wal fakkaatuun torbee lama dura prezdaant Abdulfattaah Al Sisi kora dargaggoota biyyattii irratti “Ityoophiyaan waggaa saddeet dura yeroo biyyi keenna walitti bu’iinsa keessa turte haalaa mijaawaa argattetti fayyadamtee hidha laga Abbaay jalqabuun isii kan nu gaabbisiisu” jechuu isaa gabaasuun keenna ni yaadatama.